शाओमी मी T टी आधिकारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरिएको छ Androidsis
शाओमी मी T टी आधिकारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरिएको छ
केहि हप्ता अगाडि प्रकट भयो, शाओमी मी T टी आधिकारिक रूपमा जुन १२ मा स्पेनमा प्रस्तुत गरिएको थियो। एक नयाँ फोनको साथ चिनियाँ ब्रान्डले स्पेनी बजारमा आफ्नो प्रविष्टि गर्छ। एक मोडल जुन हप्ता अघि रेडमी के २० को रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो, तर त्यसले हाम्रो देशमा यसको आधिकारिक सुरुवातको लागि यसको नाम परिवर्तन गरेको छ।
यद्यपि प्राविधिक स्तरमा हामी यस पटक कुनै फरक पाउँदैनौं। हामीसँग पहिले नै के छ यो स्पेनमा यस Xiaomi Mi 9T को आधिकारिक मूल्य हो, जुन ती विवरणहरू मध्ये एक हो जुन प्राय जसो प्रयोगकर्ताहरूले हाम्रो देशमा उनीहरूको आगमनको घोषणाको लागि पर्खिरहेका थिए।
यस समयमा सामान्य मोडलको मात्र सुरूवात घोषणा गरिएको छ। हामीसँग अहिलेको फोनको प्रो संस्करणको सुरुवातको बारेमा डेटा छैन। तर हामीलाई आशा छ कि हामीसँग यस सम्बन्धमा चाँडै नै विवरणहरू प्राप्त हुनेछ, ताकि सम्पूर्ण दायरा स्पेनका साथै युरोपका अन्य बजारहरूमा पनि किन्न सक्नेछ।
1 विशिष्टता Xiaomi Mi 9T
विशिष्टता Xiaomi Mi 9T
यो Xiaomi Mi 9T ले उस्तै विशिष्टताको साथ हामीलाई छोड्दछ हामी रेडमी K20 मा छौं। फोनले त्यस सम्बन्धमा केही परिवर्तन गरेको छैन। एक प्रीमियम मध्य दायरा मोडेल, यसको मतलब फोनको दायरामा पप-अप क्यामेराको परिचय पनि हो। हामी के देख्न सक्छौं त्यसबाट स्क्रीनले यस चिनियाँ ब्रान्ड फोनको अगाडि पूर्ण फाइदा लिन्छ। डिजाईन उस्तै हो, शाओमी लोगो बाहेक अब यस मोडेलमा प्रस्तुत गरिएको छ। जसले सम्झना गर्दैनन्, ती फोनका स्पेसिफिकेसन हुन्:
स्क्रिन: .6,39..2.340-इंच AMOLED पूर्ण HH + २, 1.080० x १ 19.5,०० पिक्सेल र अनुपात १ .9 ..XNUMX: with मा
प्रोसेसर: Qualcomm स्नैपड्रागन 730
आन्तरिक भण्डारण: /२/64। जीबी
रियर क्यामेरा: Per 48 MP एपर्चरf/ १. MP1.75 + १ MP MP साथ एपर्चरf/ २.13 सुपर वाइड एंगल + MP MP MP अपर्चरf/ २.2.4 टेलिफोटो
अगाडिको क्यामरा: 20 सांसद
अपरेटिङ सिस्टम: MIUI १० को साथ एन्ड्रोइड Pie पाई
ब्याट्री: १W डब्लु फास्ट चार्जको साथ 4.000,००० एमएएच
कनेक्टिविटी: G जी, वाइफाइ 4०२.११ ए / सी, ब्लुटुथ .802.11.०, डुअल जीपीएस, यूएसबी प्रकार सी, mm. mm एमएम ज्याक
अरूलाई: स्क्रिन अन्तर्गत फिंगरप्रिन्ट रिडर, NFC, फेस अनलक
आयामहरू: १156,7. x x .74,3१..8,8 x XNUMX..XNUMX मिमी
वजन: १ 191 grams ग्राम
यस प्रीमियम मध्य दायरामा राम्रो मोडल, साथै मार्केटमा पहिलो मोडेलमध्ये एक हो स्न्यापड्रैगन 730० को प्रयोग गर्नुहोस् प्रोसेसरको रूपमा, जुन ब्रान्डले आधिकारिक रूपमा यस वर्ष प्रस्तुत गर्‍यो। यो र्याम र भण्डारणको दुई संयोजनको साथ आउँदछ, जुन स्पेनमा बिक्रीमा राखिएको छ। क्यामरा यस Xiaomi Mi 9T को एक शक्ति हो, एक ट्रिपल रियर क्यामेराको साथ, 48 MP सेन्सर द्वारा कप्तान। थप रूपमा, तिनीहरू कृत्रिम बुद्धिमत्ताको साथ आउँदछन्, जसले दृश्यहरूको पहिचान वा उनीहरूमा थप फोटोग्राफी मोडहरूको परिचय वृद्धि गर्दछ। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पर्दा अन्तर्गत एकीकृत गरिएको छ, यसलाई प्रयोग गर्नका लागि यस खण्डमा पहिलो मोडलहरू मध्ये एक हो।
ती Xiaomi Mi 9T खरीद गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि राम्रो खबर छ, किनकि तपाईंले धेरै लामो पर्खनु पर्दैन। चिनियाँ ब्रान्डको आधिकारिक वेबसाइटमा तपाईं पहिले नै //4 GB जीबीको आधिकारिक विशेष मूल्यको साथ मोडल प्रि-खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यसको मूल्य 64 यूरो भन्दा कम छ। विचार गर्न राम्रो अवसर, यस लिंकमा के सम्भव छ। यो अस्थायी हो, त्यसैले तपाईं यस सम्बन्धमा छिटो हुनुपर्छ।
यद्यपि यसको आधिकारिक सुरुवात स्टोरहरूमा, भौतिक र अनलाइन, शाओमीको भन्दा फरक बाहेक, जुन १ 17 मा लिन्छ। तसर्थ, सोमबार देखि तपाईं स्पेन मा बिक्री को अन्य बिंदुहरु मा किन्न सक्नुहुन्छ। शाओमी मी T टी यसको र्याम र भण्डारणमा निर्भर गर्दै दुई संस्करणमा सुरूवात हुनेछ। र colors्गका लागि, हामी फोटोमा हामीले देख्ने चीजहरू किन्न सक्छौं। यस ब्रान्डले फोनको दुई संस्करणहरूसँग पहिले नै मूल्य साझेदारी गरिसक्यो:
//6 GB जीबीको संस्करण 64२eयूरोको मूल्यको साथ सुरूवात गरिएको छ
//१ GB6 जीबी मोडेलले stores 128eयूरोको मूल्यका स्टोरहरू हिट गर्दछ
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Xiaomi » शाओमी मी T टी आधिकारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरिएको छ
कसरी एपीके डाउनलोड गर्न DPI मूल्य र तपाइँको स्मार्टफोनको प्रोसेसर को प्रकार थाहा छ
शाओमी मी स्मार्टबैंड officially औपचारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरिएको छ